Couzon-au-Mont-d'Or, Auvergne Rhône-Alpes, France
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguStephane Et Audrey
Yenza okona kulungileyo ukuhlala kwakho kule ndawo intle kakhulu ikufutshane neLyon, izithuthi zikawonke-wonke kunye nemisebenzi ehambelana nosapho. Uyakuyivuyela le ndawo yokuhlala ngenxa yomthamo wayo omkhulu wendawo yokuhlala, iindawo zayo ezininzi zokuphumla ezicetywayo, ifanitshala yayo ekhethekileyo kunye nokuhombisa kwayo okuthandekayo. Ifanelekile kubahambi beshishini, iintsapho kunye namaqela amakhulu, inokuhlala ngokukhululekileyo ukuya kuthi ga kwi-11 abantu.
Uyakwamkelwa kule cottage inomtsalane. Owayesakuba yindawo yokutyela yosapho, siye sayenza ngokutsha ngokuhambelana nomoya wayo ngokubanzi. Uya kufumana ibha yoqobo kunye neefriji ezindala!
Ixhotyiswe kakuhle kakhulu kwaye inokuhlala ngokukhululekileyo ukuya kuthi ga kwi-11 abantu, i-cottage ibekwe kwindawo ezolileyo, ene-terrace ekufutshane kwaye ikhuselwe ekuboneni.
Ikunika ezi nkonzo zilandelayo:
-Igumbi lokuhlala elihle elinesofa ekhululekile kunye neTV enkulu yesikrini esisicaba. Uya kufumana kwakhona ibha kunye nakwi-enfilade yegumbi, igumbi le-cinema.
- Le yokugqibela isebenzela igumbi elikhulu lokuhlamba impahla kunye nefenitshala yegadi kwithafa, igumbi lemidlalo elinesofa kunye ne-foosball kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
I-terrace ibekwe kwelinye icala lesitalato, ihlukaniswe nendlu.
-Ikhitshi, elivulekele kwigumbi lokutyela, nayo yonke into oyifunayo ukulungiselela izitya zakho ozithandayo: i-microwave, ihob, i-oveni, isitya sokuhlamba izitya, iketile, itoaster, ikofu yomatshini, kunye nezixhobo zokupheka. Kwigumbi lokutyela uya kufumana ipiyano enebhiliyoni enkulu yetafile eguqukayo.
- Lo mgangatho unamagumbi amabini okulala ngalinye linebhedi ephindwe kabini kunye nendawo yokugcina. Kanye negumbi lokuhlambela lokuqala elinebhafu kunye nendlu yangasese.
- Ipaseji isebenza ngeendawo ezininzi ezibandakanya amagumbi amabini okulala ngalinye linebhedi ephindwe kabini, igumbi eliphangaleleyo elinebhedi elala abantu aba-2 kunye nebhedi enye.
- Igumbi lokuhlambela lesibini, elicocekileyo kwaye ligcinwe kakuhle, elineshawa enkulu, isinki, isomisi setawuli, isomisi seenwele sikwakhona kulo mgangatho. Ekugqibeleni, kukho indlu yangasese eyahlukileyo.
Ukuthuthuzela kwakho uya kuba nakho kwi-air conditioning onayo, umatshini wokuhlamba kunye nesomisi, kunye nebhodi yentsimbi kunye ne-ayina.
Ilinen kunye neetawuli zikwakhona.
Ngokwendalo, iWifi iyafikeleleka kwaye isimahla!
4.81 · Izimvo eziyi-102
Uya kuhlala kwindawo ezolileyo kufutshane nesixeko saseLyon. Izibuko langaphambili lomlambo, uya kufumana iSaône kunye neendawo zayo zokumisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Stephane Et Audrey
Chers Futurs Guests, Nous serons heureux d'accueillir les voyageurs du monde entier ! A très vite, Dear Future Guests, We will be happy to welcome travelers from around the world! See you soon, Stephane & Audrey
Ungalibazisi ukunxibelelana nathi nge-imeyile ukuba unayo nayiphi na imibuzo, siya kukuphendula ngokukhawuleza.
Siya kukuvuyela ukwabelana nawe ngeedilesi zethu esizithandayo!
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$1696
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Couzon-au-Mont-d'Or